သတင်း - Aftermarket Stereo သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
စက်တင်ဘာလ 2021- မင်းဘာကြောင့် တိုးတက်နေလဲ သိချင်နေလိမ့်မယ်။ Subaru STI android ယူနစ်သင် နှစ်သက်ရာ ဂီတကို နားထောင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် ကားမောင်းနေစဉ် လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ထုတ်လုပ်သူခေါင်းယူနစ်သည် ဂီတကို ကောင်းစွာဖွင့်နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာနဲ့ ဘာကြောင့်ရှုပ်နေတာလဲ။ သို့သော် သင်သတိမထားမိနိုင်သည့် နောက်ရောင်း၀ယ်ရေဒီယိုသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်။ စျေးရောင်းရေဒီယိုကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း သင့်ခရီးကို တိုးတက်စေမည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်။.
Aftermarket stereo ၏ အားသာချက်များ
အသံအရည်အသွေးကို သင်ပိုမိုထိန်းချုပ်လိုပါသည်။ စျေးကွက်တွင်း စတီရီယိုအများအပြားသည် လုပ်ဆောင်ချက်သတ်မှတ်ချက်အရ OEM စက်ကို စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်စေမည်ဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သင့်မူရင်းဦးခေါင်းယူနစ်တွင် ဘေ့စ်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့် treble ထိန်းချုပ်မှုများပါရှိသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သင့်တွင်ရှိသင့်သည့် အကြွင်းမဲ့အနိမ့်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ အပိုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် သာတူညီမျှမှု သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှုအား စျေးကွက်နောက်ဝယ်စတီရီယိုတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ သင်အလိုရှိသော အသံကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုအပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှုကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကားအသစ်စက်စက်တွင် ခေတ်မီနည်းပညာများပါရှိနိုင်သော်လည်း သင်သည် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းကို မောင်းနှင်နေပါက အဘယ်နည်း။ Bluetooth နှင့် အခြားချိတ်ဆက်မှုပုံစံများမပါဘဲ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသလား။ သေချာတယ် မဟုတ်ဘူး! ကားအသစ်များအတွက် ငွေပေးချေမှုများအတွက် စာရင်းသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းအတွက် စျေးကွက်အတွင်း စတီရီယိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများဖြင့် ကားအသစ်များတွင် တွေ့ရသည့် အင်္ဂါရပ်အားလုံးကို သင်ရနိုင်သည်Subaru WRX android ယူနစ်. DIN တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် နှစ်ဆ DIN လက်ခံကိရိယာကို သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ သင့်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် စမတ်ဖုန်းသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် သင့်အား ကားမောင်းနေစဉ် သင်အကြိုက်ဆုံးတေးဂီတကို နားဆင်နိုင်စေပါသည်။ ဗားရှင်းများစွာသည် ကြိုးတပ် သို့မဟုတ် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် သီချင်းနားထောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပလပ်ဖောင်းများစွာသည် ယာဉ်၏အင်္ဂါရပ်များအကြောင်း မေးမြန်းသောကြောင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သင့်အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ Subaru ၏ WRX android ယူနစ်မော်တော်ယာဉ်၏ ပြန်လည်ရောင်းချမှုတန်ဖိုးကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ တခြားဘာမှ မပါဘူးဆိုရင် ကားရဲ့ ကျက်သရေကို တိုးစေမှာ သေချာပါတယ်။ သင်ကားကိုပြသသောအခါ၊ ၎င်းသည်ရောင်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း အသံသည် မည်မျှကောင်းမွန်သည်ကို သင်ပင် အလေးပေးဖော်ပြနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဝယ်ယူသူသည် ၎င်းကို ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏နောက်ရောင်း၀ယ်ရေဒီယိုကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ယနေ့တွင် head unit အသစ်ဖြင့်သာ စတင်ချင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အလွယ်တကူ အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဘတ်ဂျက်ကို ဆွဲဆန့်ရာတွင် အမြဲတမ်း လိုက်လျောညီထွေရှိပါစေ။ သင့်ယာဉ်၏အတွင်းပိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လက်ရှိပရောဂျက်များစာရင်းကိုလည်း သင့်အား ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းအ၀ယ်အသံအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ အားသာချက်အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်၊ သင်၏မူရင်းစက်ပစ္စည်းကို အဘယ်ကြောင့် ထိန်းသိမ်းလိုသနည်း။ ၎င်းအတွက် နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များကို ပေးဆောင်ရန် အခိုက်အတန့်ရောက်လာသည်။Subaru STI android ယူနစ်. တိုတောင်းသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်ပင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစတီရီယိုတစ်ခုသည် သင့်အား အပိုချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်စရာများပေးစွမ်းနိုင်သည်။
တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၇-၂၀၂၁